जनप्रतिनिधि डोजर मालिक बन्दै::Online News Portal from State No. 4
इतिहासमै शक्तिशाली सरकार गठन भएको समयमा देशमा जनताले राहत सुशासन पाउनुपर्ने हो तर त्यो भने पाउन सकेका छैनन् । साँच्चै यतिबेला मालिक नै बन्ने भए कामको मालिक बन्ने जनताको काम सहजै गर्ने वातावरण बनाउनु बुद्धिमानी हुनेछ । डोजर मालिक र ठेकेदार बन्ने भए जनप्रतिनिधिबाट राजिनामा दिएर जानु अझ बुद्धिमानी हुनेछ ।
एकातिर संघीयता राम्रोसँग लागू नहुदै असफल हुदै गइरहेको छ । देश र जनताको लागि काम गर्छु भन्ने कसम खाएका जनप्रतिनिधि यतिबेला डोजर मालिक बन्दै जान थालेपछि सर्वत्र आलोचना हुने थालेको छ । देशमा २४० बर्ष देखि राज गर्दै आइरहेको सामन्ती ब्यबस्थाका नाइके भनेर आरोप लगाउँदै राजतन्त्रको समुल नष्ट गरी गणतन्त्र घोषणा भएको पनि १० बर्ष बितिसक्यो । अहिले देशमा भ्रष्टाचार दिन दुई गुना रात चौगुना बढेर गएको कुरामा कुनै शंका गर्ने ठाउँ छैन । जताततै बेथिति चलिरहेको छ बेला स्थानीय तहमा निर्वा्चित जनप्रतिनिधिहरू केही वर्ष यता दोहोरो जिम्मेवारीमा ब्यस्त देखिन्छन् । एक गाउँ पालिका नगरपालिकामा आफुले पाएको जिम्मेवारी निभाउन हम्मेहम्मे परेको छ भने अर्को गाउँको बिकासको लागि भनेर खरिद गरेको डोजर स्काभेटरलाई काम खोज्नु पर्ने कारणले पनि निकै गा¥हो परेको गुनासो पनि यताकता सुनिने गर्छ ।बागलुङ जिल्लामा पहिलोपटक १० वटा स्थानीय तहमा रहेका वडामा अध्यक्ष वडा सदस्य र कार्यपालिका सदस्यहरूले गठन गर्ने लागेको जिल्ला वडा संघको कार्यक्रममा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले यतिबेला मुलुकभरका वडा अध्यक्षहरू डोजर मालिक बन्दै गइरहेको भनेर कडा स्वरमा यसको बिरोध गरेका थिए । जनताको काम गर्ने कसम खाएका जनप्रतिनिधिले नक्कली उपभोक्ता समिति बनाएर आफै ठेक्का पट्टाको काम लिने आफ्नो निजी डोजर चलाउने काम गरेको भन्दै यतिबेला जनप्रतिनिधि डोजर मालिक बन्दै गएको हुदा यसलाई सुधार गर्न सुझाव दिएका थिए ।
अहिले कसले जनताको सेवा गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा हैन कसले महंगो गाडी चढ्ने भनेर नराम्रो काममा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको मन्त्री पण्डितले जुन कुरा भने त्यसलाई मनन गर्न सकेको खण्डमा फाइदा पुग्ने देखिन्छ । जनताको मत भनेको सधैं स्थिर नहुने हुदा आगामी दिनमा पनि चुनाव लड्न भए चुनाव जित्ने बिचार भए जनताको भावना अनुसार काम गरेर अगाडि बढ्नुको बिकल्प छैन । अहिले जनप्रतिनिधि राजा भन्दा पनि ठूलो भएको अहिले भइरहेको काम गतिविधिले देखाउँछ । साँच्चै हरेक ५÷५ बर्षमा देशमा चुनाव हुन्छ सधै आफ्नो ठेक्का पनि छैन टिकट पाउने र चुनाव जित्ने यो कुरालाई पनि मनन गरेर जानु उचित हुने देखिन्छ । अहिले देशमा ३ तहको सरकार छ । जुन सरकार आफैमा नत मेल छ, नत समन्वय नै ! सबै आफ्नो तरिकाले अगाडि बढी रहेको देखिन्छ । जताततै बेथिति छ कमिसनको चक्कर अहिलेसम्म नत हटेको छ नत घटेको छ । दिनहुँजसो जनप्रतिनिधि उपभोक्ता समिति कर्मचारी घुस लेनदेन गरेको समयमै समातिएका छन् । भन्सार नाका पनि त्यस्तै छ । जतिसुकै गरे पनि सुधार भएको छैन । यस्तोमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने जुन नारा अगाडि सारेका छन्, यसलाई पूरा गर्न सबै सबै इमान्दार हुन जरुरी छ । म एक रूपैयाँ नि भ्रष्टाचार गर्दिन भन्ने तर दिनहुँ अख्तियारले भ्रष्टाचारी पक्राउ गर्ने यसको मुख्य कारण के हो ? त्यो जड पत्ता लगाउन जरुरी छ । मात्रै भाषणमा समृद्धि भाषणमा सुखी नेपाली भनेर पुग्ने भए आज जनप्रतिनिधिहरू यसरी डोजर मालिक बन्नुपर्ने थिएन होला । अहिले जनप्रतिनिधि भएर काम गर्दैगर्दा नियम कानू विपरित हुने कामको कारणले भोली अख्तियारमा जानुपर्ने मात्रै हैन जेलको सजाय समेत हुने कुरा स्पष्ट छ । अहिले दिनहुँजसो कर्मचारी जनप्रतिनिधि अख्तियारकोमा बयान दिन गइरहेको तपाईं हामीले देखिरहेको बिषय हो ।इतिहासमै शक्तिशाली सरकार गठन भएको समयमा देशमा जनताले राहत सुशासन पाउनुपर्ने हो तर त्यो भने पाउन सकेका छैनन् । साँच्चै यतिबेला मालिक नै बन्ने भए कामको मालिक बन्ने जनताको काम सहजै गर्ने वातावरण बनाउनु बुद्धिमानी हुनेछ । डोजर मालिक र ठेकेदार बन्ने भए जनप्रतिनिधिबाट राजिनामा दिएर जानु अझ बुद्धिमानी हुनेछ ।